UNdebele uphakamisa eyeqhaza lawo wonke umuntu ngezingozi | IOL Isolezwe
UNdebele uphakamisa eyeqhaza lawo wonke umuntu ngezingozi
Isolezwe / 24 May 2012, 11:52am /
UNGQONGQOSHE wezokuThutha kuzwelonke uyaqhubeka nekhwelo lakhe lokunxusa abantu bakuleli ukuba bahloniphe izimpilo zabanye uma beshayela emigwaqeni.
UDkt Sbu Ndebele uthi akumele kuthathwe njengento ejwayelekile ukufa kwabantu abayinkulungwane ezingozini zomgwaqo nyanga zonke.
Uqhuba uthi ezinye zalezi zingozi zisuke zingagwemeka ukube abantu bayazihlonipha izimpilo zabo nezabanye uma beshayela emigwaqeni.
“Siphonsela abantu inselelo ukuba bazibuze ukuthi qhaza lini abalibambayo ekunciphiseni isibalo sezingozi emigwaqweni yakuleli. Sifuna lo nyaka ube esizoqinisa ngawo isandla kulabo abaphendula imigwaqo yethu inkundla yokubulala abantu, ikakhulukazi labo abashayela bedle amponjwana,” kusho uNdebele.
Uthe uMnyango unemikhankaso yokukhulumisana nabantu kuvuselelwe onembeza babo. Uthe uyakuqonda ukuthi babhekene nomqansa wokuguqula indlela engamukelekile abashayeli abaziphatha ngayo emigwaqeni.
“Izingozi eziningi ezenzekayo kuba yilezo ebezingagwemeka ngakho kubalekile ukuba siguqule indlela esicabanga ngayo eNingizimu Afrika ukuze senze isiqiniseko sokuthi siyasinciphisa isibalo sezingozi ezibulala abantu kuleli,” kusho uNdebele
Sekuphenduke insakavukela kuleli ukuthi kube nezingozi ezinyantisa igazi emigwaqweni. NgoMsombuluko kushone abantu abayisishagalombili engozini yetekisi eyenzeke esifundazweni saseMpumalanga. Leli tekisi kuthiwa belisuka eMozambique lilayishe ngokweqile ngabantu abayishumi.
Abezokuthutha esifundazweni eMpumalanga bahlela umhlangano neziphathimandla zaseMozambique zezokuthutha ukuze kudingidwe ukuthi zinganqandwa kanjani lezi zingozi.